यस्ता समस्या भएको बेला नखानुहोस् कागती Canada Nepal
डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - सेल्फ मेडिकेसन अर्थात आफुखुसी औषधि सेवन नगरौं
यस्ता समस्या भएको बेला नखानुहोस् कागती
क्यानाडानेपाल डेस्क श्रावण ३२ २०७७
काठमाडौं - हाम्रो घर वरीपरी र बजारमा कागती सजिलै पाइन्छ । स्वादमा अमिलो हुने कागतीमा प्रशस्त भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ । यसको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर कुनै बेला कागती शरिरको लागि बेफाइदा पनि हुन्छ ।
अम्लीय तत्व हुने कागतीको धेरै सेवन गरेमा विष सरह पनि हुन सक्छ । त्यसैले कागती धेरै सेवन पनि गर्नुहुँदैन । यदि तपाइको पेटमा कुनै समस्या छ भने कागती सेवन नगर्नुहोस् ।
यस्तो बेला कागती सेवन गरेमा झन पेटमा समस्या हुन्छ । यदि तपाइले अनुहारको दागधब्बा र डण्डीफोरको उपचारको लागि कागती प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, भने पनि बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
तपाईको छाला कालो वा डढेको जस्तो भने डण्डीफोरको उपचारको लागि कागती प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसले पाक्न लागेको डण्डीफोर छ भने झन समस्या निम्ताउछ । त्यस्तै यदि मृगौला तथा पित्तथैलीमा समस्या छ भने यसको सेवन गर्नुहुँदैन ।
यदि तपाईको छात्ति पोल्ने समस्या छ भने पनि कागतीको सेवन गर्नुहुँदैन । यस्तो बेला कागतीको सेवन गरेमा झन समस्या ल्याउछ ।
श्रावण ३२, २०७७ आइतवार ०१:५९:५७ बजे : प्रकाशित
यी ट्रिक्स अपनाई वाईफाईको समस्यालाई अन्त्य गर्नुहोस्
काठमाडौँ। २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसको अत्यावश्यकीय बस्तुमा इन्टरनेट अर्थात वाईफाई परेको छ । इन्टरनेट बिना मानिस क्षणभर बिताउन सकस मान्न थालेका छन् । जस कारण सहर हुँदै ग्रामिण क्षेत्रमा वाईफाई घर घरमा राख्न थालिएको छ ।
मानिसहरु अहिले एकछिन् इन्टरनेटसँग जोडिन नपाउँदा पानी बिनाको माछा जस्तै छट्पट्टाउने गर्छन्। हो, वाईफाई अहिले मानिसहरुको लागि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। तर, कहिले काहिँ घर वा कार्यालयमा वाईफाईको सिग्नल राम्रो छैन भने निकै रिस उठ्नेदेखि नैराश्यतापन समेत हुन सक्छ।
हुन त प्रविधिको विकासले अहिले फोन र कम्प्युटरमा मात्र नभएर टिभीदेखि भिडियो गेम कन्सोलहरूमा समेतमा वाईफाई जोड्न सक्ने सुबिधा प्रदान गरेको छ। यद्यपि, अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घरहरुमा सामान्य अर्थात बेसिक राउटर वा मोडेम जडान गरिदिएका हुन्छन्, जसका कारण घरको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म पनि वाईफाईको सिग्नल राम्रो हुँदैन। यही समस्याबाट छुट्कारा पाउने उपायबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
अपनाउनुहोस् यी साधारण ट्रिक्स
राउटरलाई सहि स्थानमा राख्नुहोस् : जहिल्यै पनि राउटरलाई घरको मध्य स्थानमा राख्नुहोस्। यसले गर्दा घरको हरेक कुनामा वाईफाईको सिग्नल राम्रोसँग मिल्नेछ। साथै, राउटरलाई आफ्नो आँखाको लेभल वा त्यसभन्दा माथि राख्ने गर्नुहोस् । जसले गर्दा वाईफाईको सिग्नल राम्रोसँग प्राप्त हुनेछ।
राम्रो रेन्जका लागि रिपिटरको प्रयोग गर्नुहोस् : प्रायःजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घरहरुमा सामान्य अर्थात बेसिक राउटर वा मोडेम जडान गरिदिएका हुन्छन्, जसका कारण घरको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म पनि वाईफाईको सिग्नल राम्रोसँग टिप्दैन। यस्तो अवस्थामा रिपिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस उपकरणले वाईफाईको कभरेज क्षेत्र बढाउनुका साथै सिग्नल पनि राम्रो दिने गर्दछ। रिपिटरसँग कनेक्ट हुनका लागि डब्लूपीएस सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। यसको लागि राउटरको डब्लूपीएस इनेबल गरि रिपिटर डब्लूपीएस बटनलाई पनि अन गर्नुपर्छ।
गेष्ट नेटवर्क :आफ्नो घरको राउटरमा गेष्ट नेटवर्कलाई सक्रिय गरि यसका लागि छुट्टै पासवर्ड राख्न सकिने छ। जसका कारण यदि घरमा कोही पाहुना वा साथीहरु आउँदा आफ्नो मेन पासवर्ड भन्नुपर्दैन। र जब पाहुना वा साथी घरबाट जान्छन् तब फेरि गेष्ट नेटवर्कलाई बन्द गरि आफ्नो मुख्य नेटवर्कमा कनेक्ट हुनसक्नु हुनेछ।
बेला बेला राउटरलाई रिबुट गर्नुहोस् : हुन त राउटरलाई यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ, जसका कारण यो निरन्तर चलिरहोस् । तर कहिले काहीँ यसलाई रिबुट गर्नु राम्रो मानिन्छ। जहिले पनि याद राख्नुहोस् राउटरलाई रिबुट गर्नुपर्छ, न की रिसेट । सजिलोको लागि, यसलाई दिनमा केहि मिनेटको लागि अफ गरेर अन गर्दा इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी राम्रो हुने गर्दछ।
कार्तिक ३, २०७७ सोमवार १९:५४:३४ बजे : प्रकाशित
# अन्त्य गर्नुहोस्
मोबाइलको ब्याट्री चाँडै सकिएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी पाँच सरल उपाय
काठमाडौँ। आजको व्यस्त समयमा, स्मार्टफोन बिना जीवनको कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। मानिसको लागि फोन नै उसको एक भरपर्दो साथी भएको छ। समय कटाउन, जानकारी संकलन गर्न वा मनोरञ्जनका थुप्रै किसिमका क्रियाकलाप गर्न फोन अहिलेको समयमा मानिसको लागि अपरिहार्य बनेको छ।
फोनको लगातार प्रयोगका कारण हामीसँग फोनलाई पूर्णरुपमा चार्ज हुन दिन पनि समय हुँदैन। यस्तो अवस्थामा ब्याट्रीको अभावमा फोन छिट्टै स्विच अफ हुने गर्दछ, जसकाकारण हाम्रा महत्वपूर्ण कलहरु छुट्न सक्छन्। त्यसैले, फोनको ब्याट्रीलाई लामो समयसम्म जोगाइराख्न अपनाउनुहोस् यी पाँच उपाय :
१. डिस्प्लेको ब्राइटनेस कम राख्नुहोस : फोनमा डिस्प्ले एक महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ। यदि फोनमा डिस्प्लेको गुणस्तर राम्रो भएन भने हामीले फोनमा हेर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरु गुणस्तरहिन देखाइदिन्छन्। फोनमा ब्याट्री लामोसम्म टिकोस् भन्ने चहानुहुन्छ भने फोनको डिस्प्लेको ब्राइटनेस कम राख्नुहोस्।
यसले गर्दा ब्याट्री कम खपत हुन्छ र ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्छ। तर, उज्यालो ठाउँमा ब्राइटनेस कम राख्दा डिस्प्ले केहि नदेखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा फोनमा ब्राइटनेसको मात्रालाई फेरि बधाउनुहोस् र काम सकिएपछि फेरि यसलाई घटाएर राख्नुहोस्।
२. ब्लुटुथ र लोकेसन सर्भिसलाई अफ राख्नुहोस् : यदि फोनमा ब्लुटुथ र लोकेसन सर्भिस अन छ भने यसलाई तुरुन्त अफ गर्नुहोस् । फोनको यो सुबिधाले ब्याट्री एकदम चाँडो सकिन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा यसको प्रयोग गरि फेरि यसलाई अफ मोडमा राख्नुहोस्। यसलाई तुरुन्त अफ गर्न क्विक एक्सेस प्यानलबाट गर्न सकिन्छ।
३. लाइब वालपेपर्सहरु प्रयोग नगर्नुहोस् : जब. लाइब वालपेपर्सहरु प्रयोग गरिन्छ, तब उच्च फ्रिक्वेन्सीमा प्रदर्शनहरु डिस्प्लेमा अपडेट हुन्छन् । जसले गर्दा ब्याट्री धेरै खपत हुने र चाँडै सकिने गर्दछ।
यस्ता लाइब वालपेपर्सहरुले उच्च दरमा स्क्रिन रिफ्रेस गर्नुको साथै फोनका अन्य श्रोतहरू पनि प्रयोग गर्दछ। यस्तो अवस्थामा यसलाई बन्द गर्नाले फोनको ब्याट्री आयु लामो हुन्छ ।
४. ब्याकग्राउण्ड एप्सहरु बन्द गर्नुहोस् : जब हामी कुनै एउटा एप्स खोल्छौं र त्यसलाई बन्द नगरी सिधै होम स्क्रिनमा जान्छौं यस्तो अवस्थामा ति एप्सहरु ब्याकग्राउण्डमा चलिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा फोनको प्रोसेसरले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि ब्याट्री चाँडै सकिने गर्दछ।
५. ब्याट्री सेभर मोड अन गर्नुहोस् : यदि तपाईं कतै जादैं हुनुहुन्छ र ब्याट्री चार्ज गर्ने ठाउँ पाउनु भएको छैन । साथै तपाईंको फोनको ब्याट्री पनि सकिन लागेको छ भने अहिले आएका नयाँ मोडलका फोनहरुमा ब्याट्रीलाई बचाउने सुबिधा हुन्छ।
जसका कारण एक घण्टामा सकिने ब्याट्रीलाई बचाएर यस फिचरले २ घण्टासम्म लम्भ्याउन सक्छ। यसका साथै, यदि तपाईंलाई वाइफाई जस्ता अन्य फिचरको तत्काल आवस्यक नरहेको खण्डमा यस्ता फिचरलाई अफ गर्दा पनि ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्दछ।
आश्विन २०, २०७७ मंगलवार १८:४८:१५ बजे : प्रकाशित
# पाँच सरल उपाय
मोबाइल फोन पानीमा खस्यो, अब के गर्ने के नगर्ने ?
काठमाडौँ। पछिल्लो दशक अधिकांशको हातमा स्मार्ट मोबाइल फोन हुने गरेको छ । सामान्यदेखि लाखौं मूल्य पर्ने स्मार्ट मोबाइल फोनको प्रयोगसँगै यसको सुरक्षाको चिन्ता पनि बढाएको छ । विश्वभरका सूचना यतिबेला मानिसले आफ्नो हातमा भएको मोबाइल फोनमा एक क्लिक गरेको भरमा थाहा पाउन सक्छन्।
यसको आवश्यकताको महसुस समाजमा निकै बढि गराएको छ । यसर्थ जसरी पनि स्मार्ट फोन बोक्नु उद्देश्य बनिसकेको छ । भए खाने वर्गले पनि दुई चार पैसा बचत गरेर स्मार्ट फोन किन्ने गरेका छन् । यसरी किनिएका स्मार्ट मोबाइल फोन कहिले काहीँ पानीमा खस्न वा भिज्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने र के नगर्नेबारे यहाँ जानकारी दिन खोजिएको हो ।
१. फोन भिजेको वा पानीमा खसेको अवस्थामा पहिले फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस् र पानीमा खस्दा पनि फोन सकृय छ भने कुनै पनि बटन नथिच्नुहोस र फोनलाई खोल्ने कोशिश नगर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा फोन सर्ट सर्किट हुन सक्छ।
२. यदि तपाईंसँग पुरानो फोन छ, जसबाट ब्याट्री झिक्ने सुविधा छ भने, फोनको ब्याट्री, मेमोरी कार्ड र सिम कार्डलाई बिस्तारै निकाल्नुहोस् । यदि फोनमा ब्याट्री निकाल्ने सुविधा छैन भने फोन सर्ट सर्किट हुने खतरामा रहने छ। निकालिएको ब्याट्री र फोनका अरु पार्ट्सहरुलाई फ्यानको मुनि वा हेयर ड्रायर ब्लोवरले सुकाउनुहोस। फोनमा देखिएको पानीका स साना थोपाहरुलाई सफा कपडा, कागज वा न्याप्किनले सफा गर्नुहोस्।
३. यदि ड्रायर वा ब्लोवर छैन भने यस्तो अवस्थामा फोनलाई सुख्खा चामल भित्र राख्नुहोस्, तर निश्चित गर्नुहोस् कि चामल हेडफोन ज्याकमा नपरोस् भनेर। फोनलाई चामलमा कम्तिमा २४ घण्टासम्म सुक्न छोडदिनुहोस्। यो एउटा फोन सुकाउने सबैभन्दा कुशल र सजिलो तरीका हो।
४. २४ घण्टा चामलमा राखेको फोनलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र अन गर्नुहोस्। यदि अन भएन भने एकछिन् चार्जमा राख्नुहोस र फोनलाई चालु गर्ने कोशिस गर्नुहोस्। अझैपनि फोन अन भएन भने तुरुन्त मोबाइल मर्मत केन्द्रमा लैजानुहोस् ।
आश्विन १५, २०७७ बिहिवार ००:३१:३७ बजे : प्रकाशित
# मोबाइल फोन
# पानीमा खस्यो
दूधसँग यी खानेकुरा नखानुस्, नत्र स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ला
काठमाडौं । दूध हाम्रो शरिरको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । प्रशस्त पोषक तत्व पाइने दूध शरिरलाई धेरै रोगबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।
शरिरलाई स्वस्थ राख्न धेरैले बिहान बेलुका दूध पिउने गर्छन् । दूध स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक भए पनि कुनै बेला यसले बेफाइदा पनि गर्ने गर्छ ।
हामिले दूधसँग मिलाएर खाने खानेकुराका कारण शरिरमा विभिन्न समस्याहरु हुन सक्छन् । खाना खाने समयमा कालो दाल खाँदै हुनुहुन्छ भने दूध नपिउनुहोस् । यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन ।
त्यस्तै दुध खाँएको समयमा कागती पनि खानुहुँदैन । दुध खानु भएको छ भने नुन र करेला पनि खानुहुँदैन । यसले शरिरमा समस्या निम्ताउछ । तातो दुध सुत्नु भन्दा अघि पनि खानुहुदैन ।
यसले स्वप्नदोष हुने सम्भावना बढी हुन्छ । दुध सेवन गरे लगत्तै कुनै फल पनि खाँनुहुँदैन । दुध र दही पनि एकैपटक पिउनुहुँदैन । यसले छालाको रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
दुधसँगै मूला, जामुन, माछा जस्ता पदार्थ पनि खानु हुँदैन । यसरी खाँदा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या आउन सक्छ । प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट तथा अधिक मात्रामा फ्याट भएको वस्तु खानु हुँदैन ।
भाद्र ७, २०७७ आइतवार ०१:५८:२९ बजे : प्रकाशित
केरा खानुका यस्ता छन् फाइदा : क्यान्सर, मुटु रोगबाट बचाउँनेदेखी पेटको समस्या समाधान
काठमाडौँ - शरिरलाई स्वस्थ राखिराख्न हामिले नियमित फलफुल खाइरहनु पर्दछ । यस्तै फलफुलहरु मध्ये केरा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै नै फाइदाजनक मानिन्छ ।
यसको सेवनले धेरै रोगबाट टाढा रहन सकिन्छ । यसको सेवनले उच्च रक्तचापलाई सामान्य राख्छ अर्थात नियन्त्रण पनि गर्छ । यसका भिटामिन बी ६ पाइने हुनाले शरिरमा ग्लूकोजको मात्रा सन्तुलन गराउँन युले मद्दत गर्छ ।
त्यस्तै यसको सेवनले तनाव पनि नियन्त्रण गर्छ । यसमा पाइने म्याग्नेसियमले रक्तसञ्चारलाई सहज बनाउँछ । केरामा पाइने आइरन तत्वले रगतमा हेमोग्लोबिनको उत्पादन बढाउँछ र रक्तअल्पताबाट पनि बचाउन सहयोग गर्छ । केराको सेवन गर्ने गरेमा पेटको अम्लीयपन नष्ट हुन्छ ।
पखला लागेमा दही र केरा खानाले रोक्न सहयोग हुन्छ । यसले हाड बलियो बनाउने, अल्सर हुनबाट बचाउँने, स्मरणशक्ति बढाउँने, शरिरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने लगायतका धेरै राम्रो काम गर्छ ।
यसमा पाइने फाइबरले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउछ र कब्जियतबाट बचाउँछ । यसको गुदिमा बढी मात्रामा केरोटेनाइड्स पाइने हुनाले क्यान्सर, मुटु र मधुमेहबाट बचाउँछ । यसको सेवनले पाचनक्रियालाई सामान्य बनाउन सहयोग गर्छ ।
भाद्र ७, २०७७ आइतवार ००:११:४६ बजे : प्रकाशित
नुन पानी पिउनुका यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा
काठमाडौं - हाम्रो शरिरलाई स्वास्थ राखिराख्न पानीको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । हामिले प्रशस्त पानी पिएमा शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ । पानीले शरीरका विभिन्न अंगको रक्षा पनि गर्दछ ।
यस्तै नुन मिसाएको पानीले पसन शरिरलाई धेरै फाइदा गर्छ । नुन पानीमा पनि प्रशस्त मिनरल्स पाइन्छ । एक जग पानीमा तीन चम्चा नुन मिसाएर एक दिनमा पिएमा शरिरलाई फाइदा गर्छ ।
नुन पानीको सेवनले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । त्यस्तै यसको सेवनले रक्तसञ्चारलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । शरिरको बिभिन्न भागहरु दुखेमा पनि यसको सेवनले ठिक हुन्छ ।
यसको सेवनले कुनै पनि तनावबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ । यदि आगोले पोलेको छ भने पनि नुन पानी लगाएमा दुखाई कम हुन्छ ।
त्यस्तै यसले र्यालग्रन्थि लगायत पाचन क्रियालाई राम्रो बनाउछ । यसमा सल्फर, जिंक, आयोडिन लगायतक तत्व हुन्छ जसले त्वचाको समस्याबाट टाढा राख्छ । यसको सेवनले निद्रा नलाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ ।
श्रावण ३१, २०७७ शनिवार १४:१३:२२ बजे : प्रकाशित
# नुन पानी